चिसो तरंग फेरि प्रहार! बाथरूम उत्पादनहरू, जाडो कसरी रोक्ने?
घर / ब्लग / चिसो तरंग फेरि प्रहार! बाथरूम उत्पादनहरू, जाडो कसरी रोक्ने?
2021 / 04 / 11 वर्गीकरणब्लग 646 0
एक छाल अझै शान्त भएको छैन, छाल फेरि सुरु भयो, बलियो चिसो हावा फिर्ताको लागि!
मौसम चिसो हुन्छ, साथै मानिसहरूले न्यानो राख्न ध्यान दिनै पर्छ र कपडा थप्न पनि, घरमा सेनेटरी वेयर पनि मुख्य एन्टी-फ्रीज हुनुपर्छ। पानी -4 डिग्री सेल्सियस भन्दा कममा, बरफको मात्रा बढाइन्छ, सजीलै सेनेटरी वेयर उत्पादनहरू भित्र बरफ र पानी विस्तार गर्दछ र यसैले क्र्याक उत्पादनहरू बढाउँछन्। म तपाईंलाई सेनेटरी वेयर एन्टि-फ्रिजिंग सल्लाहहरू पठाउँछु!
जाडो शौचालय जाम र क्र्याकिंग सावधानी को रोकथाम गर्न
जाडोमा, बाथरूमको ढोका र विन्डोजहरू अस्थायी रूपमा वेंटिलेशन रोक्न र भित्री तापक्रम कायम गर्न बन्द हुन्छन्। चिसो रोकथाम गर्न, कृपया शौचालय प्रयोग नभएको बेला बाँकी रहेको पानी छोड्नुहोस्।
विधि र चरणहरू निम्नानुसार छन्: इनलेट भल्भलाई बन्द गर्नुहोस्, अनक्रुभ गर्नुहोस् र निकास बोल्ट हटाउनुहोस्, र बाँकी पानी छोडेपछि ड्रेनेज बोल्ट कस्नुहोस्, अन्यथा यसले पानी चुहावट निम्त्याउँछ।
शौचालयको ब्याकवाटर बेन्डमा पानी हुनेछ। पानी चूसनका लागि स्पन्ज रग्ज र पम्प प्रयोग गर्नुहोस् ताकि लामो समयसम्म शौचालय स्थिर र क्र्याक नहोस्।
थप रूपमा तपाई पानीको ट्या tank्कीमा एन्टिफ्रिज खन्याउन सक्नुहुन्छ वा पानीमा रक्सी, नुनमा पानीको जमिन कम गर्न सक्नुहुनेछ, तर प्रभावकारी एन्टि-फ्रीज पनि। यदि बाथरूम तताउने प्रणालीको लागि खुला छ, र बाथरूम स्थिर हुँदैन भनेर सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, तपाईं शौचालयमा एन्टिफ्रिज थप्न सक्नुहुन्न।
जाडो सि s मर्मत सावधानी
बरफ प्रयोगको लगत्तैपछि यसलाई सुख्खा रागले सुकाउनुहोस् जुन बरफको कारण हुने सतह फुटाउनबाट बच्न। सफा गर्दा, सि steel्कको सतहमा कोर्नबाट बच्न स्टील सेनेटरी वेयर प्रयोग नगर्नुहोस्। कम इनडोर तापमानको मामलामा, तपाईं सिन्कलाई कपडाको लेयरले ढाक्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई कम तापक्रमको कारण फूटबाट इन्सुलेट गर्न।
जाडो बाथटब मर्मत सावधानी
सबै भन्दा पहिले, बाथटबको प्रत्येक प्रयोग पछि, बाथटबलाई सुक्खा राख्नुहोस्, ताकि लामो समयसम्म पानीको सीपिएज विरूपण वा सतह बन्द हुने छैन र प्रयोग गर्न सकिदैन। सफाईको समयमा, बाथटब सतहको क्षयबाट बच्नको लागि कडा एसिड र क्षारीय सफाई प्रयोग नगर्नुहोस्। नरम कपडाले सफा गर्नुहोस् ताकि स्क्रेचहरू नहोस्, र यदि गल्तिले हल्का स्क्र्याच भयो भने तुरुन्तै सतहलाई पोलिश गर्नुहोस् चिकनाई पुनःबहाली गर्न। रस्टिंग वा बाथटबको सतहमा हुने क्षति, यसको सौन्दर्य र व्यावहारिकतामा पार्ने असरबाट बच्न बाथटबको सतहमा धातु वस्तुहरू नराख्नुहोस्।
जाडो बाथरूम क्याबिनेट मर्मतसम्भार सावधानी
नुहाइसके पछि बाथरूममा, पानीको सफा गर्दा, समयमै बाथरूम क्याबिनेट सतह हुनु पर्छ। बाथरूम क्याबिनेट प्राय: केही साबुन, अनुहार धुने, शैम्पू र अन्य सफाई सामग्रीहरूमा राखिन्छन्, यदि दुर्घटनावश बाहिर, यो तुरुन्त सफा गर्न उत्तम छ, भारी चीजहरू बाथरूम क्याबिनेटको तल राख्नु पर्छ। बाथरूम क्याबिनेट सफा गर्दा, धातुको तार, पाष्टर कपडा, कडा रासायनिक स्क्रबिंग प्रयोग नगर्नुहोस्, र क्षतिबाट बच्न पानीको प्रयोग नगर्नुहोस्। उचित रूपमा तटस्थ क्लीनर र अन्य व्यावसायिक उत्पादन मर्मतको प्रयोग गर्नुहोस्।
जाडो नल एन्टी-फ्रीज क्र्याकिंग सावधानी
(१) नल फ्रस्ट क्र्याक कारण।
० the वातावरणको प्रयोग मुनि, तल तर निम्न कारणहरूमा सीमित छैन।
१, परियोजना पूर्व पानी परीक्षण पछि, बाँकी पानीमा नल बाहिर राखिएको छैन।
२, नल स्थापना आउटडोरमा, पानी इनलेट वाल्भ बन्द नगरी, र एन्टी-फ्रीज सुरक्षा गरेन।
,, मालिक छुट्टीमा वा लामो अवधिको गैर-निवासमा छ, कोठा तातो छैन, नल अवशिष्ट पानी निकाल्न पानी इनलेट वाल्व बन्द गरेन। मालिकले कोठाको भेन्टिलेसनको नवीकरण गरे, विन्डोज रातमा बन्द भएन, र पानीको इनलेट वाल्भ बन्द भएन ताकि बाँधको पानी नलबाट बाहिर जान दिए।
(२) कसरी उपायहरू रोक्न सकिन्छ।
० ℃ वातावरणको प्रयोग मुनि, तर निम्न सावधानाहरू सीमित छैन।
१, प्रोजेक्ट साइट नल स्थापना वातावरण तापमान जस्तै ० ℃ भन्दा तल, यसलाई अस्थायी रूपमा नल स्थापना वा अस्थायी गैर-पानीमा स्थापना नगर्न सिफारिश गरिन्छ, वा पानीको परीक्षण पाइपको पानीलाई राम्रोसँग निकाले पछि।
२, रातमा भान्छाको झ्यालहरू बन्द गर्नु पर्छ, बाथरूमलाई बाहिरी भाग र पछाडित कोठाको कोठामा भित्री तापक्रम ० ℃ माथिको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न।
,, कोठाको लागि जहाँ इनडोर तापक्रम ० below भन्दा कम छ, इनडोर वाटर मीटर वाल्भ बन्द गर्नुहोस् र बाँकी पानी पाइपमा छोड्नुहोस्।
,, इनडोर तापमान ० ℃ कोठा भन्दा कम छ, तताउने खोल्न आवश्यक छ, तापक्रम ०4माथि राख्नुहोस्।
,, तपाईं कपास र सूती कपडा, पुरानो सूती कपडा, कपास ऊन र अन्य इन्सुलेशन सामग्री गाढा र कडा नल लपेट्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
अघिल्लो :: शौचालयमा एउटा शेल्फ स्थापना गर्नुहोस्, बाथरूम तत्काल अधिक Squ स्क्वायर मीटर लाइभ! अर्को: घरको बाथरूम, भित्ता शौचालयमा छनौट गर्नुहोस्? वा फ्लोर ड्रेनेज शौचालय?
2021 / 06 / 08 167
2021 / 05 / 28 468
2021 / 04 / 22 702
2021 / 04 / 22 953
2021 / 04 / 21 561
2021 / 04 / 12 718